युएईमा इमिराती संगै बिदेशी कामदारको तलब बढ्ने ?
दुबई : युएई सरकारको महत्वा’कांक्षी दुबई एक्स्पो २०२० आज शुक्रवार देखि सुरु भएको छ । को’रोनाको कारण केही ढिला भए पनि युएईले आज एक्स्पोको भब्य सुभा’रम्भ गरेको छ ।
त्यति मात्रै होइन युएईले आफ्नो श्रम सम्बन्धि कानुनलाई परिमार्जन गरि कामदारमैत्री कानुन बनाउने घोष’णा गरेको छ, जुन घोषणा संगै तलब वृद्धिको कुरा पुनः उठेको छ ।
उसो त युएईका सरकारी तथा गैरस’रकारी कम्पनीमा
काम गर्ने बैदेशिक तथा स्वदेशी कामदारको हरेक बर्ष तलब वृद्धि निश्चित प्रतिशतले गर्दै आएको छ । हाल झन दुबई एक्स्पोको कारण तलब सबै कामदारको वृद्धि हुनेमा स्रोत बताउने गर्छ । एक्स्पो सुभारम्भ संगै युएई सरकारले बिदेशी कामदार तथा नागरिकको लागि अफरै अफर ल्याएको छ । .
युरोपको दाजोमा लग्दै गरेको दुबईले कामदारको तलब वृद्धि देखि म’ल्टिपल भिसा सम्मको अवसर ल्याएको हो ।
यूएई सरकारले ५ वर्षे ‘मल्टि’पल इन्ट्री भिसा’को आवेदन लिन सुरु गरेको छ । यूएई सरकारले सबै देशका नागरिकका लागि ५ वर्षे बहु–प्रवेश पर्यटन भिसा खुल्ला गरेको हो ।
पाँच वर्ष भिसा अवधि रहने र पर्यटकलाई आफ्नै प्रयोगमा धेरै पटकसम्म प्रवेश गर्न पाइने र प्रत्येक बसाइमा यूएई भित्र ९० दिनसम्म रहन सक्ने बताइएको छ । सो भिसालाई अर्काे ९० दिन समयअवधि थप्न सकिने बताइएको छ । यस्तो भिसाको आवेदनको लागि आवेदकले संघिय प्राधिकरणमार्फत ६ सय ५० दिराम ति’र्नुपर्ने छ।
यूएईस्थित पर्यटन एजेन्सीहरुले बहु–प्रवेश पर्यटन भिसाको उपलब्धताको सुनिश्चित गरेका छन् । इच्छुक आवे’दकले परिचय तथा नागरिकताको लागि संघिय प्राधिकरणको वेभसाइ’टबाट आवेदन दिनसक्ने बताइएको छ । यद्यपि, ट्राभल एजेन्सीलाई कोटा प्रणाली भने लगाइएको छ।
आवेदकले आवश्यक पर्ने बैंक सम्बन्धी कागजात र अन्य कागजात स्वयम् सिधै अपलाड गर्न सक्नेछन् ।आवेद’कहरुलाई भिसा प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने निणर्य आप्र’वासन प्राधिकरणमा नी’हित रहने बताइएको छ ।
उता एक्स्पो संगै युएईमा रहेका सबै कामदारको तलब कम्तिमा २० प्रतिशतले बढ्ने बताइएको छ । एजे’न्सिको अनुसार ५० प्रतिशत सम्म तलब वृद्धि हुने बताइए पनि को’रोनाको कारण त्यसलाई कम्तिमा २० प्रतिशतमा झारेको बताइएको छ । बढेको तलब २०२२ को सुरु देखि नै प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।- चिया गफ बाट
२०७८ मंसिर १९, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 38 Views